Uchungechunge Umhlaba: ogawuthola ongaqondakali angaphandle. uhlu the best
Abathakathi, nabathakathi, izilo, eyayisekhanda lami - heroes ukuhlukanisa nezimfihlakalo kusuka okuvusa usinga futhi ethukile. uchungechunge Mystical eside iye yathandwa ngababuka eziningi. Lokhu akusona isimanga. Ethandwa kakhulu ogawuthola angaphandle ezingaqondakali. Uhlu okungcono kungaqhubeka kuze kube phakade, kodwa phakathi kwabo kukhona nalabo nje kungagwenywa cha.
Uhlu onesihloko esithi "eziphezulu chungechunge ezingaqondakali" kuholela iphrojekthi "Beauty and the Beast." Izimo zethu zihluke kakhulu ubudala futhi owaziwa inganekwane wathola omunye ukuchaza. Ngalesi sikhathi, kuba show abadala. Uzungu wakhiwa ngendlela yokuthi yonke indaba ngiyaphupha. Kufana indaba emakhulwini eminyaka adlule. Uchungechunge futhi linendawo imizwa romanisticheskih ukuthi iyoqhuma phakathi protagonists.
Kulo mfanekiso, intombazanyana bophulwe monster lapho yena nonina behlaselwa izigcwelegcwele. Ngemva kweminyaka eminingi, naye waqala ukusebenza umphenyi amaphoyisa endawo parallel uzama ukuthola umsindisi wabo. Futhi ngelinye ilanga isimangaliso kwenzeka. Bahlangana. Basuke kwesokunxele amasosha efile ucwaningo zofuzo. Akuwona wonke kuyinto kamnandi.
Heroes abahlukene wancishwa inkumbulo wayonakalisiwe isosha. Emhlanganweni, akazi othandekayo wakhe. Ngemva kuyisikhathi eside Uyakhumbula ozithandayo futhi ndawonye baqala silwe nalabo kudala ibutho lwezinto eziguqulwe izakhi zofuzo.
Ohlwini "The Best American uchungechunge ezingaqondakali" yavela futhi "Game of Thrones." Onjiniyela Project uyicabangisise indaba ngendlela yokuthi uchungechunge ngamunye - iyona usongo futhi imfihlakalo. Lapha, wonke umuntu uzama sabe esihlalweni sobukhosi Seven Imibuso ngokwabo. Ikakhulukazi umzabalazo okweqile senzeka phakathi imindeni eyisikhombisa zasebukhosini. Ngendlela engaqondakali, kulolu chungechunge isibe sibonga White Walkers. Bahlala ngalé izindonga uyakwazi ukuvusa abafileyo.
Kuyaphawuleka ukuthi unkosikazi umqondisi sika waqale ngokumelene ukuqopha yochungechunge, wezwa sengathi ulinde ukwehluleka. Nokho, kwacaca ukuthi okuphambene. Ukuthandwa yochungechunge nomthelela ukuvela amahemuhemu mayelana ababuki ngeke zonyaka eziyisikhombisa. Bayoba okuningi. Njengoba Bathi abalandeli, Abadali yephrojekthi ihlele uxolela 10 zonyaka. Uma ngempela ukususa kumdlalo, kuzobalwa kuphela ukujabulisa abalandeli we Saga.
Uhlu onesihloko esithi "uchungechunge Mystical futhi kumnandi" futhi ifilimu hit "The Vampire Diaries." I okuphakade uthando unxantathu ithole uhlobo ukubonisa kulombukiso. Izinhlamvu main - lena yesikole evamile nabangane bakhe ababili. Brothers - eyayisekhanda lami. Omunye wabo ngokomthetho uhlobo "okuhle" futhi musa ukubulala abantu, yesibili - a "okubi", ke feeds kuphela igazi lomuntu. Lokhu iphakethe lensiza yemethadatha isetshenziswa njengoba icebo namafilimu isiRashiya, hhayi kuphela angaphandle uchungechunge ezingaqondakali. Uhlu amaphrojekthi kakhulu kule uhlobo bayaqhubeka "The Vampire Diaries."
Ukuthandwa yochungechunge odlale ezandleni ngabameli US kanye "Red Cross" Babesebenzisa isiqubulo ethize ukuheha ngegazi. "Zamori vampire indlala. Nginikeze igazi! "Kwezwakala njengoba isiqubulo sabo. donor ngamunye wathola isikhumbuzo i yokukhangisa impahla uchungechunge okukhethekile ozithandayo.
Kulesi phrojekthi, kukhona spin-off, okuyinto futhi ikutshela mayelana nokuphila vampire. Uchungechunge oluthi "sidilizwa" lembula umzabalazo kwamazibulo eyayisekhanda lami bodwa ngoba amandla nempumelelo. Indaba yakhe akukanciphi okuthakazelisayo futhi kujabulisa kuka indaba the eyayisekhanda lami abasha yesimanje.
Mhlawumbe iphrojekthi uhlobo kakhulu futhi magic owenza uhlu nanhlanu engcono imfihlakalo chungechunge. Adam Horrovits futhi Edward Kitsis wadala indaba ethakazelisayo, esiqintini ohlanganisa nje emihlabeni emibili - langempela fabulous.
Ekuqaleni konke UVulindlela kubonakala sengathi ecacile futhi akunangqondo: singa ngokushesha ukukhomba ngubani villain futhi ngubani iqhawe. Kodwa nangenkathi yonyaka namaqhawe zinhlamvu phendla kuyacaca ukuthi namadoda abanesibindi futhi unawo amaphutha kanye villains ngcono.
Mysteries - yilokhu ehlukanisa uchungechunge abavamile futhi engaqondakali. Zonke uchungechunge engcono ukugcina nozungu kuze uchungechunge odlule. Uchungechunge lokugcina isizini iphenduka ibe nesiqalo esisha. "Once Upon a Time" - nayo iyathinteka kulokhu. Uma isizini yokuqala indlovukazi embi wafuna indawo kusuka ochungechungeni ochungechungeni lembula yobuntu bakhe obuhle, bese inhliziyo umama olubucayi okunxanelayo hhayi retribution, kodwa ukuze avikele ingane yakhe. Emma kanye Regina, lapho zonyaka ezimbili zokuqala bengavumelani ngenxa uHenry uthando, bese kamuva baba abangane. Emma, unina begazi uHenry, wathatha uthando nokunakekela kwawo umama womfana ekungeyona eyakhe, Regina.
Kulolu chungechunge, ungabona Snow White ne-Prince Charming, Rumpelstiltskin, Little Red Riding Hood. Lezi abalobi efanayo Uxhuma futhi Disney Elsa Anna, ngubani Umshana Eqhweni Queen ku iskripthi. Amaqhawe baboshwa Izibopho behlobene ababi. Abalobi nombono original kakhulu inganekwane. Basuke kulolu chungechunge ziye zazama ukwembula izizathu ukuziphatha eziningi zezingane izinhlamvu owaziwa ngamunye. izinhlamvu yehlukene kaningi okubalwa, imfihlakalo futhi esonta ezingalindelekile ukudalelwa - konke lokhu kwenza show ezithakazelisayo izibukeli babo bonke ubudala.
Ethandwa kakhulu phakathi kwentsha Russian ukujabulela angaphandle uchungechunge ezingaqondakali. uhlu engcono uyaqhubeka ifilimu "Moonlight." Uchungechunge isitshela indaba vampire futhi abavamile intombazane uthando. Imizwa yabo ukuhlangabezana eziningi izithiyo ngesimo abasha ubuhle lover futhi owayeyintombi yakhe unkosikazi vampire.
Vampire ngxabano Mick nomkakhe baqala eminyakeni eminingi edlule. Wayeqiniseka ukuthi wayeselitholile sengimbulele futhi asindisa ntombazanyana, okuyinto emva kwesikhashana futhi sathandana. Kodwa izinto zizokwenzeka ukuze umkakhe wasinda futhi ezama ukubuyela budedengu yakhe ethandekayo. Mick kuyodingeka isinqumo esinzima.
Top uchungechunge ezingaqondakali kungaholeli ezenzweni indaba ngendlela yokuba kukhulume. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene yochungechunge lokuqala. "Moonlight" enquma ukubhubhisa ezinye canons: uchungechunge iqala enengxoxo umlingisi losemcoka, okuyinto ahlahlele okuthunyelwe kokuqala izibukeli eyayisekhanda lami.
Ekuqaleni, abadali yochungechunge ngokuthi "Twilight", kodwa ukushicilelwa noveli Stefani Mayer wenze izinguquko ezithile. Ukuze ugweme ukudideka, ababhali kumelwe ngishintshe igama labo ukuze "Moonlight".
Umlando Van Helsing
Umzabalazo okuqinile phakathi kokuhle nokubi ababonakali ngezikhundla uchungechunge ezingaqondakali hhayi kuphela. Uhlu ogawuthola amaphrojekthi ezithathwe uhlobo ezingaqondakali, qhubeka "Grimm" futhi "Amademoni / Kugcine Van Helsing." Abantu abanamandla ngokumelene ukwenza imilingo nokuthakatha. Kwakudingeka umuntu okwazi ukuvikela kubo futhi abavikele amabutho otherworldly. Kuzo zombili uchungechunge protagonist ifunda okungukuthi ongowenzalo lokugcina abazingeli alwa okubi yemiphefumulo okumsulwa.
Ukuze esigabeni esifanayo amaphrojekthi zihlanganisa ochungechungeni TV "Buffy - the Vampire Slayer" ". Angaphezu kwawemvelo" futhi I "Buffy" ngoba imiphefumulo yabantu olwisana abasha intombazane yaseMelika ngubani unamandla Amazing. Abazalwane ababili athungatha amademoni esele umzingeli likababa uchungechunge "angaphezu kwawemvelo."
"Umngani wami omkhulu uX Amafayela"
Poltergeists, izipoki, nezakhamuzi musa ukuhlala sibukela. Ngaphandle kwawo, abakwazi ukwenza uchungechunge efanayo ezingaqondakali. Uhlu kuqhubeka "The X-Files." Uzungu kugxile Agent Fox Mulder and Dana Scully kuhle enisebenza naye. uchungechunge ngasinye esisha - kungenye indaba. Kodwa kulo lonke uchungechunge main icebo ngentambo ugciniwe.
Ngisho e umshayeli zazixoxa ukuthi njenge-ejenti ingane Fox elahlekile Samantha udade. Ukuba umphenyi okhethekile we-FBI, Fox Mulder akakhohlwa umsebenzi wayo ophambili nosemqoka - ukuthola lapho udadewabo.
"Sleepy Hollow" futhi "Highlander" uzokutshela indaba abafi ababelwa nomunye eminyaka. Lezi zinhlelo ezimbili - okungcono uchungechunge ezingaqondakali of izifundo ezifanayo.
"Elingenalutho Sleepy" utshela indaba umgibeli ngubani ezikude esidlule ezazenziwa empini anqunywe ikhanda. Kuvuka kwabafileyo, uqala ebulala abantu. Ukulwa emelene nezinye kuvuka kwabafileyo - uyindoda efanayo nokukhulunywa ngubani eminyaka ambalwa adlule ikhanda umgibeli.
Umlando "Highlander" ihlukile kancane. Lolu chungechunge yathathwa njengoba phambili eponymous sici ifilimu, isitshela indaba Duncan MacLeod - awufi, olwela ngokumelene abasekeli okubi. Esikhathini chungechunge, isivele ayeyinzalo ka Duncan. Wabuye, like esasisandulele, impi kungaqedwa ne abafi, owathatha ohlangothini okubi.
Abathakathi, nabathakathi, abathakathi - iyona isigamu lensikazi okubi. Ngaphandle kwawo akunakwenzeka ukuba zibone ngeso lengqondo uchungechunge ezingaqondakali kwezilwandle. "Uhlu best", "Izinto ezintsha cinema ezingaqondakali" - zonke izigaba, okuyinto ibandakanya abathakathi enhle.
Lonke icebo kulezi amafilimu osontekile emhlabeni abathakathi. Ngo "Abathakathi of East End" umlingiswa oyinhloko ezama ukuvikela namadodakazi, yena olufundisa kubo amantombazane njengoba abavamile. Kuze kube yileso sikhathi, amanye amantombazane musa ngisho usola ukuthi unekhono elithile. Kodwa magic akufihli, futhi aluthole indlela yokuphuma.
"Uloyiwe" - kuyinto retroserial, okuyinto namuhla ubhekwa omunye wemisebenzi yakhula kakhulu abathakathi. Uzungu kugxile uyathakatha, Samantha, ubani oshada ofayo. Umyeni wafunda amakhono umkakhe, licela ukuba waphonsa ngaye. Ngokuvamile izibukeli ezimi bakwazi phezu 254 chungechunge ubuke ukuthi uma Samantha wakwazi ukugcwalisa izithembiso zakhe.
"13 Witch" utshela indaba nodadewethu abangu-13 abayizisulu uyathakatha-ekuzingeleni. Kodwa enye yamantombazane wakwazi ukubaleka kuqalisa. Wenza into noDeveli futhi ibuyisela ekuphileni nodade abagcwele yokuziphindiselela. Ndawonye banquma ukufeza ukwahlulela kwaso kulabo ngokhahlo kwaba sekufeni kwabo.
Ukukhetha ifoni ephathekayo
Ihhotela Aqua Bella Amahhotela Asemabhishi 4 Turkey: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Izidakamizwa zokunciphisa ukucindezelwa kwegazi - usizo olusheshayo emzimbeni
Incazelo, izintengo, izithombe, ikheli kanye imodi okusebenzela kuyo eMoscow Zoo. Dolphinarium e-zoo eMoscow